Ciidamada DF iyo Galmudug oo dib u qabsaday Camaara
Ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Galmudug ayaa dib u qabsaday duhurnimadii maanta magaalada Camaara ee Gobolka Mudug, halkaasi oo muddo kooban ay saaka soo galeen maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay dadka degaanku u sheegeen idaacadda VOA.
Ciidamada dawladda ayaa lagu soo warramayaa inay haatan si buuxda gacanta ugu hayaan Camaara. Warbaahinta dawladda Soomaaliya ayaa soo tebisay in duqayn cirka ah lala beegsaday maleeshiyada ururka Al-Shabaab, nawaaxiga Camaara saaka. Ilaa hadda dawladda Maraykanka oo gaysata inta badan duqaymaha ka dhanka ah Al-Shabaab ma aysan xaqiijin duqayntaasi iyo inuu khasaare ka dhashay.
Wasiirka Warfaafinta ee Galmudug Axmed Shire Falagle ayaa isaguna VOA u sheegay in dhinca cirka laga duqeeyey maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana uu beeniyey in ciidamda dawladda markii hore laga qabsaday camaara.
Al-Shabaab ayaa saaka weerar ku bilowday qarax ismiidaamin ah kusoo qaadday Camaara. Warar ay ilo kala duwan ka heshay VOA ayaa sheegaya in khasaare ka dhashay weerarka Al-Shabaab.
Horraantiii bishan ayey ahayd markii ciidamada dawladda iyo kuwa Galmudug ay degaannada Bacaadweyne, Camaara iyo Qeycad ka qabsadeen Al-Shabaab kadib guluf milatari oo toddobaadyo socday.
Warbixintan waxaa soo diray Cabdiwaaxid Macallin Isxaaq.